Ogaden News Agency (ONA) – Gudoomiyaha JWXO iyo xubnaha jaaliyadda Norway oo kulmay
Gudoomiyaha JWXO iyo xubnaha jaaliyadda Norway oo kulmay
Posted by ONA Admin	/ February 10, 2014
Waxaa maanta lagu qabtay wadanka Norway magalada Oslo shir aad loo soo agaasimay oo Godomiyaha Jabhadda Wadaniga Xoraynta Ogadenia mudane Adm Mahamed Cumar Cusman uu la qaatay xubnaha jaaliyadda ee ku dhaqan wadankaasi .
Ugu horayn waxaa shirka furay xoghayaha jaaliyadda Norway mudane Axmed Afjar oo halkaasi ka aqriyay ajandaha shirka . Kadib ayaa waxaa la wareegay shirka godoomiyaha jaaliyadda mudane Abdishakuur Xaaji shirka ayaa lagu furay aayado qur,an ah kadibna heesta calanka ogadenia .
Abdi shakuur waxuu ka sheekeeyay wax qabadkii jaaliyadda Norway faracyada iyo hayada kala duwan ee ay jaaliyaddu la shaqayso. War bixin dheer oo meelo badan tabanaysa ka dib ayaa waxaa si aad u diiran hadalka loogu soo dhaweeyay gudoomiyaha jabhadda wadaniga xoraynta ogadenia mudane Adm Mahamed Cumar Cusman. Gudoomiyaha ayaa ugu horayn u mahad celiyay ka soo qaybgalayaasha shirka iyo sida loo soo agaasimay kulanka .
Gudoomiyuhu ayaa xubnaha siiyay warbin dheer oo tabanaysa dhinacyo badan iyo heerka uu maanta halganku marayo. Kadib ayuu gudoomiyuhu u soo dhadhacay in uu la dardarmo xubnaha iyo maamulka jaaliyadda sidii loo sii dar dar galinlahaa halganka xaqaha iyo in la ilaaliyo midnimada isaga oo tilmamay dhibatada ka imaan karta hadii wadashaqayntu ka leexato jidkii loogu tala galay .
Warbixintii gudoomiyaha ka dib waxaa loo sii gudbay qodob kale oo ah dood furan iyo su´aalo lagu waydiinayey gudoomiyaha jwxo halkaas oo ay xubnuhu si qalbi furan u waydiiyeen sualaha ay qabeen iyo talobixino aad u mihiim ahaa xubnaha isla markaasna uu gudomiyuhu ka bixiyay jawaab faahfaahsan dhaman suaalihii la waydiiyay.
Gudoomiyaha wuxuu sidoo kale qortay talo biximihii xubnaha isaga oo balan qaday in uu ku dadaali doono wax kasta oo uu halganka ku samaynayo hormar.
Guntii iyo gabagabadii shirka ayaa lagu soo xidhay jawi farxadeed oo aad u dagan .